Windows Live Writer ka WordPress | Martech Zone
Windows Live Writer ka WordPress
Tuesday, July 26, 2011 Sunday, Jenụwarị 19, 2014 Douglas Karr
Fọdụ folks enweghị ike iguzo n'iji websaịtị edezi edezi na-abịa yana ngwa dịka WordPress. Anaghị m ata ha ụta… M hapụrụ ha ọgaranya edezi ngwá ọrụ afọ ndị gara aga ma dee HTML m na posts m. E nwere ihe ọzọ ọzọ maka Microsoft Windows ọrụ na m na-egosi a ahịa n'abalị a, ezie… Windows Live Ọdee akwụkwọ.
Windows Live Writer adịwo gburugburu ruo afọ ole na ole ugbu a na WordPress wuru n'ime ya API iji nyere ya aka ikwurita okwu. Nwere ike ibudata isiokwu gị na Windows Live Writer nke mere na ọ dị ka ị na-ede ihe ozugbo na nlele blog gị.
Nzọụkwụ mbụ bụ ịtọlite ​​ikike ibipụta drafts na posts gị na ịntanetị. Emezuru nke a na Ntọala> Ederede ngalaba nke nchịkwa WordPress:
Na-esote, ịchọrọ ibudata Windows Live dị mkpa 2011. Enwere ngwa ole na ole ga - ebu ibu site na ndabara na Live Essentials… M ga - emechi ngwa nhọrọ niile ka ị nwee ike ị nweta Live Writer arụnyere:
Ozugbo arụnyere, mepee Onye na-ede ndụ ma họrọ usoro ịde blọgụ gị - WordPress n'okwu a:
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ijikọ na blog gị. Ikwesiri pịnye blog gị URL, aha njirimara na paswọọdụ gị ma ọ ga-ejikọrịrị. Mgbe a jụrụ m, m ga-akwado ibudata isiokwu blog gị ka ị nwee ezigbo anya ma nwee mmetụta na ntanetị gị mgbe ị na-ede ha.
Ozugbo Live Writer na-ebudata isiokwu gị na edemede gị, ị kwesịrị ịdị mma ịga!
Nye ya ule na-agba ọsọ site na ịhọrọ blog gị na menu ma gbakwunye post blog. Ziga ya na blọọgụ dị ka ihe edere. Banye na WordPress, pịa posts ma ị ga-ahụ ihe ịdepụtara ebe ahụ!
Tags: iphone 5 isiokwuiphone 5 isiokwu akara ogologowindo mobile isiokwuwindows mobile isiokwu akara ogologo
Ezigbo ego nke Social Media
Nov 13, 2011 na 10:17 PM
ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma maka windo m na-ebi ndụ na wordpress, agbanyeghị mgbe m tinyere foto ma bulite na blọọgụ ahụ, n'akụkụ wordpress m na-enweta ihe dị ka koodu HTML. Nwere ike ịkọwa otu esi edozi nke a ???
Nov 14, 2011 na 12:24 AM
O doro anya na K Milloy - mana ọ nwere ike ịbụ nsogbu ngbanwe. Enwere ụfọdụ ozi na WordPress, ọ bụ ezie: http://codex.wordpress.org/Windows_Live_Writer_Help